Iindaba - isiqingatha senyanga uMnyango umise ngerabha
Ungalugcina njani uMnyango umile? I-Stop Stop, ekwabizwa ngokuba kukuchukumisa ucango, ikwalucango emva kokuvula isixhobo sokutsala, ukuze kuthintelwe ukuvuthuza komoya okanye uchukumise ucango kwaye luvalwe. Isango lokumisa lahlulahlulwe laba yimagnethi esisigxina Umnyango wokumisa kunye nomnyango we-electromagnetic Misa iintlobo ezimbini, ukutsalwa komnyango kamazibuthe okusisigxina kusetyenziswa ngokubanzi kwiminyango eqhelekileyo, kunokulawulwa ngesandla kuphela Umnyango we-Electromagnetic usetyenziswa kwiingcango ezingacimi umlilo kunye neWindows kunye nezinye izixhobo zolawulo lwe-elektroniki, zombini ulawulo lwencwadi kunye nemisebenzi yokulawula ngokuzenzekelayo.
Ugcina njani uMnyango umile? La manqaku mabini alandelayo kufuneka aqatshelwe:
1, ukuthintela ukungqubana ekuphatheni.
2, xa ucoca, zama ukungamanzisisi iinxalenye zesinyithi, qala usebenzise ilaphu elithambileyo okanye umsonto owomileyo womhlaba ukuze ususe uthuli, emva koko wosule ngelaphu elomileyo, uhlale womile. Sukusebenzisa izicoci ezinemibala okanye ukonakalise umphezulu womaleko.
Indlela ekhethekileyo yokufaka ukutsalwa komnyango ingathunyelwa kula manyathelo alandelayo:
Ulufaka njani unyawo kwi-Stop Stop
Umatshini oqhelekileyo wokuma kweminyango Misa ngohlobo lofakelo lwendonga enyusiweyo, udidi olunyusiweyo emhlabeni, uhlobo lweplastiki, uhlobo lwentsimbi ngokwento leyo; Ukufunxa umnyango we-Electromagnetic ngokweendlela ezahlukeneyo zeemveliso zokufaka ucango zahlulahlulwe zohlobo lwe-CT-01, uhlobo lomhlaba we-CT-02, uhlobo lwe-CT-03 lwendidi ezintathu, udonga lwe-electromagnetic Door Stop ngokungqinelana nolwakhiwo olwahlulwe lwaba luhlobo oluqhelekileyo, ukuphakama uhlobo, uhlobo olwandisiweyo, uhlobo lwebhokisi, uhlobo olumnyama, uhlobo lwengalo ende; Uhlobo lomhlaba wokufunxa umnyango we-electromagnetic suction yenziwe nge-CT-01 yohlobo lwodonga lokufunxa umnyango we-electromagnetic kunye ne-right-angle angle bracket mounting; Uhlobo lwetyathanga i-electromagnetic Door Stop yenziwe nge-CT-01 yohlobo lwodonga lwe-electromagnetic Door Stop kunye nokuqina kwetyathanga; Ngenxa yokuba uhlobo lodonga lwe-CT-01, uhlobo lomhlaba lwe-CT-02 kunye nohlobo lwe-CT-03 lwetyathanga lomzimba we-Stop Stop umzimba uqhelekile omnye komnye, kulula ukuba abasebenzisi bakhethe ngokwemiqathango yofakelo lwesiza.